दृष्टिकोण Archives ~ Page4of 19 ~ Banking Khabar
कुसुम लामा, उपाध्यक्ष, प्रभु ग्रुप / नेपालमा अझै पनि हुण्डी र रेमिट्यान्सको विषयमा सबै नेपालीले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । हुण्डी के हो, र किन यसबाट पैसा पठाउनु हुँदैन भन्नेबारे सबैलाई चेतना पनि छैन । आधिकारिक रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउँदा के फाइदा हुन्छ …
नगद कारोबारमा १० लाख को सीमा किन ?
प्रकाश भण्डारी – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भसंगै नगद कारोबारमा दस लाखको सीमा तोकेपछि अहिले सो व्यवस्थाको सान्दर्भिकताको बारेमा चर्चा शुरु भएको छ । र पहिला जुन रुपमा यो प्रावधानले व्यावहारिक रुपमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट शंकाका …
ध्रुवराज पौडेल – नेपालमा साना तथा लघुउद्यम (Small and Micro Enterprise, SME) व्यवसायको इतिहास धेरै पूरानो छैन । यस व्यवसायको विकासका लागि वि.सं. १९९६ मा नेपाली कपडा र घरेलु ईलम प्रचार अड्डाको रुपमा सुरु भई वि.सं. २०३० सालमा घरेलु तथा साना …
नेपालको ब्यापार घाटा र यसलाई कम गर्न बैंक तथा वित्तीय सस्थांको भुमिका
सुबोध पोखरेल । ब्यापार भनेको धन आर्जन गर्नका लागि बस्तु तथा सेवाको विनिमय हो । मानव सभ्यताको विकासको सुरुवातसंगै ब्यापारको पनि विकास भएको मानिन्छ । सभ्यताको सुरुमा मुद्राको प्रयोग आएको थिएन अथवा वस्तुसँग वस्तु साट्ने गरिन्थ्यो । पछि मुद्राको सुरुवातसँगै …
बैंकिङ क्षेत्रमा ‘क्यासलेस ट्रान्जेक्सन’ र विधिहरु
निलेशमान शिंह प्रधान / मूलुकहरुमा क्यास ट्रान्जेक्शन झण्डै शून्य प्रतिशतमा छ । स्विजरल्याण्ड, नर्वे जस्ता देशहरुमा क्यासलेस कारोबार हुने गरेको हामीले बिभिन्न संचार माध्यममा पनि देखेका छौं । कतिपय देशहरुमा यसका लागि नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । क्यासलेस ट्रान्जेक्शन …
सेयर ब्रोकरको सेवामा पारदर्शीताको खाँचो (रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषणा)
रविन्द्र भट्टराई । सेयर ब्रोकरका शाखाहरू विभिन्न सहर तथा जिल्लाहरूमा क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । यसले लगानीकर्ताको सेयरमा लगानी गर्ने पहुँच बढाउँदै लगेको छ । यसले लगानीकर्ताका सुविधा पनि बढाएको छ । पहुँच र सुविधामात्र लगानीकर्तालाई पर्याप्त छैन । पहुँच …
‘बीमा जीवनको सुरक्षा हो, यसर्थ चिया खाने पैसा काटेर बीमा गरौं’
नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा करिब ३० बर्षको अनुभव लिएका आश्विनी कुमार ठाकुरकरिब डेढ बर्षदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रशासकको रुपमा कार्यरत छन् । उनी मानिसको जीवनलाई सार्थक र सुखमय बनाउनको लागि विमा गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । यसैबीच, राष्ट्रिय विमा संस्थानले वर्तमानमा …
ढुन बहादुर बुढाथोकी- अहिले सिंगो बिश्व एउटा गाउँमा रुपान्तरित छ । फेसबुक, युट्युव, ई–मेल, इन्स्टाग्राम, टुईटर, स्काईप, भाईबर, गुगलिङ, ट्रान्सलेशसन, अनलाईन सपिङ, ईबैंकिङ, ईट्रेड, ईबिजनेश, ई हेल्थ, ई गभरनेन्स, ई कर्मस, ई लर्निङ आम कुरा भएको छ । यसको श्रेय इन्टरनेट …
बैंक खाता : आबश्यकता र महत्व
म्यान्मारको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा बुद्धिजमको चौतर्फी प्रभाव
मधुसुदन पोख्रेल- सबैको चाहना : आर्थिक द्रुत विकास २०७४ असार १४ गते सम्पन्न भएको स्थानिय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन र सो को मत परिणामलाई लिएर यति वेला नेपालमा आम जनमानसमा ठुलो चर्चाको विषय बनेको छ । औषत करिव ७२ प्रतिशत …